Lahatsary : Fananihana An’i Chirripó, Teboka Avo Indrindra ao Costa Rica · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2012 23:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Aymara, Filipino, عربي, polski, Español, русский, English
Cerro Chirripó no avo indrindra any Costa Rica, izay 3 820 metatra ambonin'ny ranomasina. Nandritra ny vanim-potoana maro samihafa, nahasintona mpananika tendrombohitra maro avy ao an-toerana sy avy any ivelany ny fiakarana aminy. Ahitana ny fomba fananihana azy samihafa tokoa ny lahatsary manaraka etoana. Ny voalohany mampiseho ny iray amin'ny fananihana voalohany, tamin'ny taompolon'ny 1960, ary taty aoriandriana kokoa ny manaraka.
Ao amin'ny fampahafantarana Fiakaran'ny Herimpo : nananika an'i Chirripó tamin'ny 1960 [es], nanapa-kevitra ny hanao dia maharitra ny tanora lahy sy vavy hahatratra ny teboka faratampon'i Costa Rica. Azontsika arahina ny dia [anjoria] tamin'ny alalan'ny fiara, sarety, ambony soavaly hatramin'ny fotoana tsy maintsy mananika ny tampony amin'izay, izay naharitra herinandro.
Ho voarakitra ho tantara ny dia satria fanindroany ny fahatongavana teny no voaporofon'ny fametrahana sonia tanaty boaty fametrahana taratasy : ireo porofo ireo no tokony hanaporofo amin'ny mpihanika tendrombohitra manaraka fa efa nisy ny nahatratra ny faratampony teo aloha. Sambany ihany koa tamin'izany fotoana izany no nandray anjara tamin'ny fahatongavana teny ny vehivavy maromaro. Ahitana fitantarana antsipirihany tsy dia fandre loatra ny fitantaran'ny iray amin'ireo mpandray anjara, Rodrigo de la Ossa, izay mpamantatra ny toetr'andro. Hafa kosa ny lalana aleha amin'izao fotoana izao, ary fohy kokoa.
Saripikan'ny tampon'ny Cerro Chirripo – sary CCBySA an'i Peter Andersen
Amin'izao fotoana izao, mahatratra 19,5 km ny halavan'ny lalana manatratra ny tampon'ny Chirripó, ary tsy maintsy misy alina iray andalovana mialoha ny hahatrarana izany, ao amin'ny fialofana iray. Ahitana fiarakarana tamin'ny 2010 ny lahatsary manaraka (misy dika an-tsoratra), ary nakarin'i tetsuo1337.
Fizarana 1 :
Fizarana 2 :
Fizarana 3 Tafiditra ao amin'ity fizarana ity ny fiposahan'ny masoandro hatreny an-tampony eny, ary ahitana ny ranomasimbe pasifika sy ny ranomasina Karaiba hatreny an-tampony eny, raha manga dia manga ny lanitra. Amin'ny andro mazava ihany koa no ahitana ny setroka avoakan'ny volokano Turrialba.
Fizarana 4 sy 5.